बजेटका प्राथमिकता र कृषि रुपान्तरण
आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणको चपेटामा सबैभन्दा बढी कृषि क्षेत्र परेको छ । उदारीकरणका माध्यमबाट कृषि क्षेत्रलाई धराशायी बनाएर पनि सरकारले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण, यान्त्रिकीकरण गर्ने कुरा कहिले पनि गर्न छोडेन । तर, कृषि क्षेत्रमाथि उठ्न सकेन । ३०÷४० वर्ष अगाडि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको ६० प्रतिशत रहेकोमा उदारीकरणको नीतिले गर्दा अहिले २७ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित भएको छ । झण्डै ६० प्रतिशत जनसंख्या संलग्नता भएको कृषिप्रधान भएको हाम्रो देशमा कृषिजन्य वस्तुको कुल उपभोगमध्ये आधा जति आयात गरेर उपभोग गर्नुपर्ने, आयातित वस्तु पनि विषादीयुक्त हुने र अधिकांश मानिसले यिनै विषादीयुक्त खाद्यवस्तु र तरकारी उपभोग गर्ने गरेका कारण रोगव्याधीले ग्रस्त हुनुपरेको यथार्थता हाम्रोसामु छ ।
बाटो समाजवादको आधार निर्माण : संविधानले समाजवादको आधार निर्माण गर्ने बाटो देखाएको छ । उदारवादको, बजारमुखी अर्थनीतिको ह्यााङ नछोडी समाजवादको आधार निर्माण हुँदैन । संविधानले खाद्यसम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था गरी प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक हुने, खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने प्रत्येक नागरिकलाई हक हुने, खाद्य सम्प्रभुताको हक हुने उल्लेख गरेको छ । बजेट बनाइरहँदा क्रान्तिबाट बनेको दस्तावेज त १० पटक नै पल्टाउन जरुरी छ । यस्तै संविधानले अनुपस्थित भूस्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्ने चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, उत्पादन बढाउन भूउपयोग नीतिका आधारमा कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने, कृषकका लागि कृषि सामग्री र कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारको पहुँचको व्यवस्था गर्ने भनेर संविधानमै कृषि क्षेत्रको विकासको जुन संवैधानिक दिशाबोध भएको छ । यसको स्प्रिट त कृषि क्रान्ति गरेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने दिशामा परिलक्षित छ । तसर्थ, पनि सरकारले सबै कामलाई छोडेर कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिएर बजेट बनाउन जरुरी छ । बजेट बनाउँदा जब कृषि क्षेत्र पछाडि पर्छ, स्पष्ट छ हामी आयातित अर्थतन्त्रमा पराधीन भएर बाँच्न विवश भइरहनेछौं ।
कृषिलाई धराशायी बनाएर वैदेशिक रोजगारीको खेतीको सुरुवात : गाउँघरमा खेतबारी बाँझो राखेर युवालाई विदेश जान बाध्य बनाइयो । अझ विदेश पठाउन सरकारले नै नीति बनाएर मेनपावर व्यवसायीको खेती गराउने काम ग¥यो । कतिपय राजनीतिक पार्टीका नेताले त विदेश पठाउन सहयोग गर्छु भन्दै भोट मागे । कतिपय राजनीतिक दलका नेता नै मेनपावर व्यवसायी बनेर दलालीको काम गरे । सरकारले पनि विभिन्न देशमा श्रम सम्झौता गरेर बेरोजगार श्रमिकलाई विदेशमा नै रोजगारी गर्न बाध्य बनायो र अहिलेसम्म आइपुग्दा पनि सरकारले यो काम गर्न छोडेको छैन । वैदेशिक रोजगारीमा गएका परिवारजनको सामाजिक तनाव र द्वन्द्व कति घट्यो होला ? विदेशमा गएर कतिले जोखिमपूर्ण काम र शारीरिक अशक्तताका कारण कतिले मृत्युवरण गर्नुप¥यो होला ? कुनै हिसाबकिताब छैन । वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिटान्सलाई खालि अर्थतन्त्र चलाउने माध्यम मात्रै बनाइयो । भनिन्छ, रेमिट्यान्समा अर्थतन्त्र चलाउने कुनै पनि मुलुकको विकास दिगो हँुदैन । अब भारत, मलेसिया र खाडी मुलुकबाट आउने २०÷२५लाख मानिससँगै नेपालीका लागि थप वृद्धि हुने खाद्यान्नको मागले खाद्यवस्तु आपूर्तिका साथै रोजगारीमा पर्ने चापले कृषि उत्पादनमा युद्धस्तरमा ध्यान नदिने हो भने माग वृद्धिसँगै खाद्यान्न अभाव सिर्जना गरी भोकमरीकैै अवस्थामा मुलुकलाई पुर्‍याउनेछ ।
कृषि क्षेत्रमा देखिएका समस्या : प्रथमतः कृषि, निर्वाहमुखी, गुजारामुखी रहँदै आयो । भूमिको असमान वितरणका कारण वास्तविक कृषि कर्ममा लाग्नेका लागि जमिन उपलब्ध नहुनु, जमिन हुनेको जमिन बाँझो हुनु, मल, बीउ समयमा उपलब्ध हुन नसक्नु र सिँचाइको अभाव हुनु, अकासे खेतीमा निर्भर रहनु, व्यावसायिक खेतीका लागि सुलभ ढंगले कृषि ऋण उपलब्ध नहुनु, उत्पादित वस्तुको बजारको सुनिश्चितता नहुनु, बिचौलियाका कारण उचित मूल्य प्राप्त नगर्नु, जनशक्तिको अभाव हुनु, आदि कारणले कृषि क्षेत्रको विकास हुन सकेन । कृषि उत्पादनमा सेवा पुर्‍याउँदै आएका सार्वजनिक संस्थान चिया, चिनी, कृषि औजार, दुग्ध विकास, कपास विकास, धानचामल कम्पनी आदि संस्थान निजीकरण गरिनु, कृषियोग्य जमिन बाँझो राखेर विषादीयुक्त तरकारी, फलफूल तथा खाद्यान्न आयात गर्ने खुला, अनुदानको दुरुपयोग र हतोत्साही नीति, सुलभ कृषि कर्जाको अभाव आदिका कारण कृषि क्षेत्र पछाडि परेको छ । यस्तै, अहिले लकडाउनका कारण किसानले उत्पादन गरेको वस्तु बजारमा जान नपाउँदा त्यसै नासिएर, कुहिएर ठूलो नोक्सानी बेहोरेका छन् ।
कृषि क्षेत्र नै उत्पादन, रोजगारी, भोकमरी हटाउने मुख्य आधार ः अब कोरोनाका कारण उत्पादन र रोजगारीका क्षेत्रमा जुन भयानक अवस्था सिर्जना हुँदै छ । यसलाई समाधान गर्न कृषिको विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिनै पर्दछ । तसर्थ, अब कृषि क्षेत्रलाई नै अर्थतन्त्रको मुख्य चालक क्षेत्र बनाउन जरुरी छ । आगामी बजेटले मुख्यतः निम्न क्षेत्रमा कृषिको विकास गर्न जोड दिनुपर्दछ । कृषि क्षेत्रको विकासमा सरकार नै अग्रसर भएर रोलमोडलको भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ । तसर्थ, आगामी बजेटमा कृषि क्षेत्रका लागि कुल बजेटको १५ प्रतिशतसम्म विनियोजन गरेर कृषि उत्पादनको कार्यलाई बहुआयामिक एकीकृत कार्यक्रमको थालनी गर्नुपर्दछ ।
नमुना कृषि फार्म संचालन स् कृषि विकासमा सरकार नै अग्र भागमा आएर रोलमोडल भएर आधुनिक, प्रविधिमा आधारित कृषि, पशु, फलफूलका फार्म हरेक प्रदेशमा सञ्चालन गर्नुपर्दछ । कृषि विकासको काम निजी क्षेत्रले गर्ने हो भनेर सरकार बस्नुहुन्न । यसरी सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा सञ्चालन गर्ने कृषि फार्महरू कृषकका लागि ज्ञान, सीप र प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने र उनीहरूलाई कृषि कर्ममा उत्प्रेरित गर्ने माध्यम बनाउनुपर्दछ । यस्तै, कृषिसँग सम्बद्घ कृषि आौजार कारखाना, उखु खेती तथा चिनी उद्योग, पशुपंक्षी आहार दाना उद्योग, पशुजन्य ओषधि उद्योग, मल कारखानाको स्थापना र सघन ढंगले कृषि अनुसन्धान तथा बीउबिजन केन्द्रको विस्तारलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिएर नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।
सहकारीमा आधारित कृषि विकासको थालनी : यसका साथै सरकारको रोलमोडलको जगमा कृषकलाई सहकारी कृषि फार्ममा संगठित गरी लिजमा जग्गा प्रदान गर्ने, सरकारको अनुदानमा आधारित स्थानीय सरकारको सिफारिसमा बिनाधितो सस्तो दरमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्दछ । यसका लागि बैंकहरूले कुल कर्जाको २० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गर्नेगरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिनुपर्दछ । अब खेतीयोग्य निजी तथा सरकारी जग्गा बाँझो नराख्ने नीतिका साथ कृषिखेती तथा वनमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्नेे नीतिका साथ भू–उपयोग गर्ने, जग्गा हुनेले कृषि बाँझो राख्न नहुने, खेती गर्न नसक्नेले स्थानीय सरकारलाई लिजमा दिने र सरकारले कृषि उद्यम गर्ने किसानलाई वितरण गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । यस्तै, सरकारले मास स्केलमा उत्पादन गर्न कुन ठाउँमा कुन खेती गर्ने भनेर माटो परीक्षण गरी परीक्षणका आधारमा मात्रै खेतीबाली लगाउन सक्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ ।
जटिल बन्दै चेलीबेटी बेचबिखन समस्या
यौन चाहना पूरा गर्न सक्ने उमेरका महिलाहरूको बेचबिखन ठूलो समस्याको रुपमा रहेको छ । हजारौको संख्यामा नेपाली चेलीबेटीहरू भारतका विभिन्न सहरहरूमा वेश्यावृत्तिका लागि बेचिन बाध्य भएका छन । पछिल्लो समयमा मानव अंग बेचबिखनका लागि महिलामात्र नभइ पुरुष र वालकहरू वेचिने गरेका छन् । शरीरका महत्वपुर्ण अंग मृगौला, आँखाका नानी जस्ता अंगलाई अवैध ढंगले बेच्ने उद्देश्यका लागि पुरुषहरू पनि बेचिनेक्रम बढेको देखिन्छ ।
विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट गरिएका अध्ययनबाट सबैभन्दा बढी संख्यामा चेलीबेटी बेचिने जिल्लाहरूमा सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, काभ्रे, गोरखा लगाएतका जिल्लाहरू पर्छन् भने तराईका दाङ, नवलपरासी, कैलाली, धनुषा, महोत्तरी, बाँके आदि छन् । काठमाण्डौ, भक्तपुर र ललित्तपुर पनि यो समस्याबाट अछुतो भने छैन । अपरिचित व्यक्तिहरूले विभिन्न अकर्षण देखाई ललाइफकाई गर्ने आफ्नै नातेदारहरू जस्तै काका, भान्जी दीदी, फुपु लगायतका व्यक्तिले दलालको रुपमा काम गर्दे घुमाऊन तथा तालिम दिने लैजाने बहानामा फकाएर बिक्री गर्ने गरेका घटनाहरू प्रशस्तै भटिएका छन । नक्कली विवाह गरी राम्रो र पर्याप्त तलव सुविधा लिने वाचा गरी वेच्ने गरिन्छन । निशुल्क पदार्थ दिने वाचा गरी वेच्ने गरिन्छन । पदार्थ दिने मिठो खाना राम्रो लगाउन दिने भन्दै प्रलोभनमा पारेर पनि वेचिने गरेका घटनाहरू छन् । उपत्यकाकामा कार्पेट तथा गार्मेन्ट कारखानामा काम गरिरहेका केटीहरूलाई स्थान परिर्वतन गर्ने वाहानमा लागू पदार्थ सेवन गराइ अचेत अवस्थामा सिमाना कटाएर विक्री गर्ने गरिएका पाइन्छ । एक दशक अगाडिसम्म भारतमा मात्र सीमीत भएको नेपाली चेलीबेटी बेचबिखन अव तेस्रो देशमा पनि सामान्य भइसकेको छ । अवैध मार्गवाट अनेकौ वहानामा वेश्यावृत्तिका लागि नै चेलीबेटी वेचिन कुनै पनि दृष्टिकोणले उचित मान्न सकिदैन । कानुनले दण्डित गरेका भए पनि नयाँ तरिका र शैलीमा मानवबेचबिखनका गिरोह संगठित रुपले आफनो कुकर्मको धन्दा चलाई रहेकै छन् । सीमा सुरक्षामा प्रभावकारी जाँच नहुनु कानुनको कार्यान्वयन नहुनु कारवाही फितलो हुनु कारवाही पनि पहुँचको आधारमा गरिनु जस्ता गलत प्रवृत्तिले गर्दा यो समस्या जटिल वन्दै गएको देखिन्छ ।
एकातर्फ प्रहरी प्रशासनबाट चेलीबेटी बेचबिखन गर्ने आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुनेलाई पक्राउ गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने क्रम बढेको देखिन्छ भने अर्कोेतर्फ नयाँ ढंगले नयाँ मार्गको पहिचान गर्दै भारत लगायत अन्य तेस्रो मुलुकहरू चेलीबेटी पु¥याउनेक्रम पनि उत्तिकै बढेर गएको छ । व्यवस्थित मर्यादित र कानुनी ढंगले रोजगारीका लागी महिला बैदेशिक रोजगारीका लागि जानु पाउने उनीहरूको स्वतन्त्रताको अधिकारलाई कुण्ठित राज्यबाट पनि गरिनु हुँदैन । त्यसैगरी कामदारको रुपमा बिदेश जानुपूर्व ज्यादै गम्भीर भई सुरक्षित स्थान हो होइन बुझेर मात्र जाने र लाने गर्नुपर्छ खुलासिमानाका कारण नेपालबाट भारतमा विनारोकतोक मानिसहरू आवागमन गर्न सक्छ । प्रहरी प्रशासनले निगरानी गर्दा गर्दै पनि कतिपय दलालहरूले चेलीबेटी भारततर्फ सहजै लैजान सक्ने अवस्था छ । वैवाहिक सम्वन्धलाई देखाउने गरिन्छ जुन नक्कली रुपमा गरिएको हुन्छ त्यसैगरी दाजुवहिनी मामाभान्जी काकाभतिजा जस्ता मूल नाता देखाएर समेत वेश्यावूत्तिमा संलग्न गराउने अवस्था पुर्‍याउने गरेका छन अशिक्षा सामाजिक समस्या आर्थिक अवस्था सौतेनी व्यावहार आदिले गर्दा कतिपय घरपरिवारको वातावरण अनुपयुक्त हुनपुग्छ कतिपय युवतीहरू घरायसी वातावरण खराब भएकै कारण घरछाडेर हिड्न्ने जसलाई दलालहरूले सहजै विदेश पुर्‍याउने गरेका घटना प्रशस्तै भेटिन्छ केहि महिलाहरू गाउँ छाडेर सहरमा केहि समय विताई पुन गाउँमा जाँदा उनीहरूको रवाफ देखेर पनि अन्य महिलाहरू त्यसप्रति आकषिेत भई सहर आउन लालयित हुन्छ फलस्वरुप बेचिन पुग्छन् । राजनीतिकमा संरक्षण कारण अपराधिक गतीवीधीलाई चाहेर पनि निरुत्साहित गर्न नसक्दा मानवबेचबिखन कार्य न्युन हुनुको साटो वढ्दै गएको देखिन्छ ।
सीमा अतिक्रमणमा भारतीय मनोविज्ञान
हाम्रा पुर्खाहरुको सौर्य, बलिदान र अथक संघर्षको परिणाम हो नेपाल राष्ट्र । यो एकैदिनमा बनेको होइन । अपार प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण र धार्मिक धरोहरहरूको पावन स्थल भएकाले यस भूगोलमा संसारभरिका प्रभुत्ववादी र साम्राज्यवादी शक्तिहरुले आँखा नलगाएका होइनन् । यसका बाबजुद हाम्रा अग्रजहरुको दूरदर्शिता र बुद्धिमत्ताका कारण नेपाल राष्ट्र बनेको र जोगिएको हो । खासगरी बेलायती र तिब्बतीहरुको निशानाबाट यस भूमिलाई जोगाउन अग्रजहरुले गरेको बलिदानीलाई हामी कदापी बिर्सन सक्तैनौँ । जसका कारण आज हामीले आफूलाई नेपाली भन्न पाएका छौँ र विश्वव्यापी रूपमा आफ्नो पहिचान बनाएका छौँ । नेपाल निर्माण यताका अढाई सय वर्षमा धेरै उतारचढाव पनि झेलेका छौँ तथापि नेपाल र नेपालीको शिर झुक्न दिएका छैनौँ ।
नेपालबाट राणाशासनको अन्त्य गरी लोकतन्त्र स्थापना गर्न नेपाली काँग्रेसले चलाएको संघर्षलाई सहयोग पु¥याएको देखिए पनि भारतको राजनीतिक अभिष्ट सकेसम्म नेपाल खाने, नसके नेपाललाई आफ्नो कठपुतली बनाउने नै थियो । त्यसको एउटा दृष्टान्त राणा काँग्रेस संयुक्त मन्त्रीमण्डलमा गृहमन्त्री रहेका क्रान्तिका मुख्य नेता बीपी कोइरालालाई मोहन समशेरले पदबाट राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री मातृका प्रसादलाई बनाउनु थियो । मातृका र राजालाई मिलाएर काँग्रेसलाई किनारामा धकेल्ने र नेपालको शासनलाई अधीनमा लिई विस्तारै क्रमिक रूपमा नेपालकोे सार्वभौमसत्ता समाप्त पार्ने भारतीय गुरुयोजना थियो । यस भारतीय योजनालाई छर्लङ्गै बुझेका बीपी कोइरालाको अवरोधका कारण तत्काल नेपाल कब्जा गर्ने उसको दाउ पूरा हुन सकेन । अन्ततः संसदमा दुई तिहाइ बहुमतका साथ प्रधानमन्त्री भएका कोइरालालाई अपदस्थ गराई जेलमा राखेर राजा महेन्द्रमार्फत नेपाल हत्याउने अर्को रणनीतिमा भारत अग्रसर भएको देखिन्छ ।
सन् १९६२ बाट कालापानीमा बसेको भारतीय सेनाले आफ्नो प्रभुत्व बिस्तार गर्दै थियो भने सुस्ता लगायत दर्जनौँ ठाउँमा नेपालको भूभाग अतिक्रमणमा पर्दै गयो । नेपालका कुनै पनि सरकारको प्राथमिकतामा सीमा सुरक्षा नपर्नु साच्चै नै दुःखद् विषय थियो । राजालाई राजगद्दी र नेताहरुलाई सत्ताबाहेक अरू कुनै कुरासँग मतलब थिएन । २०६२/०६३ को ऐतिहासिक परिवर्तनपश्चातका सरकारहरुले समेत यस विषयमा कुनै चासो नदेखाउनु अझै उदेकलाग्दो विषय थियो । यो रवैयाबाट भारत उत्साहित त छँदै थियो, उसको मनोबल समेत बढिरहेको थियो । त्यसैको परिणामस्वरूप नेपाली भूमिबाट झण्डै ८० किलोमिटर बाटो बनाउन भारत सफल भयोे । भारतको यस बलमिच्याइँ र सफलताका लागि हामी पनि जिम्मेवार छौँ ।
कोरोनाको त्रासमा मानव समाज र धर्ती
सन् १९१४ मा अफ्रिकी मुलुक नाइजेरियामा इबोला भाइरसले महामारी फैलिरहेको थियो । त्यहाँ हजारौँको मृत्यु भयो, लाखौँ जनताको जीवन खतरामा पर्‍यो । त्यस घडीमा चीनले १ हजार जना स्वास्थ्यकर्मीसहित औषधि उपचार सामग्री पठायो । क्युवाले १ हजार जना डाक्टर र अमेरिका, ब्रिटेनले पनि स्वास्थ्यकर्मी एवं औषधिहरू पठाएर सहयोग पुर्‍याए । सो कदम विश्व भ्रातृत्वको एक नमुना हो । साझा सवालमा सबै एक भएर कदम चाल्नुपर्छ भन्ने त्यस बेला महत्वपूर्ण सन्देश दिएको हो, तर नाइजेरियामा इबोला राम्ररी नियन्त्रण नहुँदै अमेरिकी दबाबले त्यहाँको सरकारले क्युवाली डाक्टरहरूलाई फिर्ता गर्‍यो । यो घटना दाँतमा लागेको ढुङ्गोजस्तै थियो ।
विज्ञको भनाइअनुसार अमेरिकामा हरेक वर्ष रुघाखोकी, निमोनियाँले ६० हजारभन्दा धेरै मान्छे मर्छन् । त्यहाँको वातावरणीय प्रदूषण, खानपान र जनजीवन नै त्यसको मूल कारक हो । यसमा अमेरिकाको बदनाम कसैले गरेको छैन, तर आफ्नो प्रतिस्पर्धी भयो भनेर चीनको बदनाम गर्न र क्युवालाई हतोत्साहित पार्न अमेरिका उद्यत देखियो । यसले दीर्घकालसम्म ऊ स्वयंलाई हानि गर्छ ।
जलमण्डल, भूमण्डल र वायुमण्डलमा लाखौँ प्रकारका आँखाले नदेखिने जीवाणुहरू छन्, जसलाई अङ्ग्रेजीमा अमिबा, हाइड्रा, ब्याक्टेरिया, भाइरस इत्यादि भनिन्छ । तिनैको सन्तुलनले धर्तीमा जीवजन्तु र पक्षीहरूको सृष्टि, विकास र वृद्धि भएको हो, जल, जमिन र आकाशमा विचरण गर्छन् । झन्डै ७० लाख वर्षअघि सृष्टि भएको एक प्रकारको बाँदरजस्तो वनमान्छे विकासकोे क्रममा दसौँ, बीसौँ लाख वर्षपछि उनीहरू पृथ्वीका तीन फरक–फरक भूगोलमा पुगे । युरोपको चिसो जलवायु, अफ्रिकाको तातो हावा र आसियानको न्यानो वातावरणमा पुगेर ती क्रमशः गोरा, काला र पहेँला मान्छे बने, जसलाई आर्यन, हब्सी र मङ्गोल भनिन्छ । ती तीनै मूल नश्ल र उपनश्लहरूका मिश्रणले कालान्तरमा असङ्ख्य जाति, जनजातिहरू बने । आज नेपालमै १ सय २४ जाति र १ सय २३ भाषा छन् भने संसारमा ६ हजार भाषा हजारौँ जाति तथा जनजातिहरू छन् । त्यसै गरी पृथ्वीका सबै मानिस हिन्दु, बौद्ध, इस्लाम, क्रिस्चियन, ताओ, यहुदी लगायत प्रकृति पूजक मानिने बोनजस्ता थुप्रै धर्म–दर्शनमा विभक्त छन् । यो पृथ्वी, मानव जाति र यहाँका सबै कुरा आआफ्नो ईश्वरले जन्माएको दावी यी सबैको । जब कि यीमध्ये सबभन्दा पुरानो धर्म–दर्शन हिन्दू सम्प्रदायको जन्म भएकै ५ हजार वर्ष भएको छैन । प्रकृति पूजक मानिने बोन धर्मावलम्बीहरूचाहिँ पहाड, नदी, वनजङ्गल, हिमाल, सूर्य आदिलाई सृष्टिकर्ता मान्छन् । यो कुरा भने सत्य हो, प्रकृतिको जन्म भएको अर्बौं वर्ष भयो ।
आज पृथ्वीभरिका मान्छेहरू आमरूपले विविध धर्म–दर्शनका अनुयायी छन् । तीमध्ये बोनवादीहरूको चाहिँ अस्तित्व नै सङ्कटमा छ । कपोकल्पित पूर्वजन्म र पुनर्जन्म, स्वर्ग र नर्कको वकालत गर्ने अनेक धर्मले जनमानसको दिलदिमागमा प्रकृति विरोधी चिन्तन सम्प्रेषण गरेर पथभ्रष्ट तुल्याएका छन् । त्यही कारणले उनीहरूका दैनिक क्रियाकलाप, जनजीवन र सामाजिक व्यवस्थाहरू सबै कृत्रिमतामा आधारित छन् । यस्ता चिन्तन वा प्रवृत्तिले प्रकृतिलाई निर्मम दोहन र शोषण गर्छन् । हुन पनि कृत्रिमतामा आधारित दर्शनले प्राकृतिको महान् स्रोत कसरी संरक्षण होला ?
यहाँ त्यस्ता चिन्तनलाई ‘कृत्रिम दर्शन’ भन्नुको मूल कारण हो— ती सबै धर्म–दर्शनका अनुयायीहरूले आआफ्ना भगवान् (?) हरू भनौँ ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, महमद, ताओ, बुद्ध, यसु वा क्राइस्ट, मसिहाहरूले सम्पूर्ण प्रकृतिको सृष्टि गरेको अफवाह पैmलाउँछन् । समुद्र, हिमाल, नदी, आकाश, जमिन, जीवजन्तु, पक्षीहरू तिनैले बनाएको दाबी गर्छन् । जब कि यी तर्कमा कुनै वैज्ञानिक आधार छैन । प्रकृतिभन्दा आफ्नो धर्म–दर्शन र त्यसका प्रतिपादक (मान्छे) हरूलाई माथि राखी सर्वोपरि मान्नु स्वयं ठूलो भ्रम हो वा कृत्रिमकता हो । तसर्थ मान्छेहरूले आफूलाई सर्वेसर्वा ठाने तर प्रकृतिलाई किञ्चित पनि मानेनन् । अनि त वनजङ्गल विनाश गरेर भए पनि सहर–बजारहरू बसाल्ने, पहाड–पर्वतहरू उजाडेर धातु र कोइलाहरू निकाल्ने, समुद्रको पिँधमुनि गएर भए पनि पेट्रोलियम र ग्यासहरू थुत्ने, हिमालको बाटोभरि फोहोर थुपार्दै तोरण (छुर्गेन, लुङ्दार) हरू टाँग्दै शिखर उक्लने, वन्यजन्तु, पक्षी एवं जलचरहरूको सिकार गर्ने, खोला र नदी किनारका वनजङ्गल फाँडेर खेतीपाती गर्ने जस्ता प्रकृति प्रतिकूल क्रियाकलापहरूले तीव्रता लिइरहेका छन् । अझ हुँदा नहुँदाका कर्महरू गरेर आर्जन गरेको धनले मनलाग्दी लत्ताकपडा, फर्निचर, घरभवन, गरगहना, गाडीवाहन, रेफिजेरेटर, कुलर, जुत्ताचप्पल लगायत अनेक प्रकृति विरोधी वस्तुहरू थुपार्ने, फेर्दै जाने र जति महँगो भयो उति उसको प्रतिष्ठा बढ्ने, मूल्यमान्यता स्थापित हुने सामन्तवादी संस्कृति बन्यो । यी सम्पूर्ण कुरा प्रकृतिका लागि घातक छन् । जलमण्डल, भूमण्डल र वायुमण्डलमा भीषण आक्रमण गरी तिनमा असन्तुलन ल्याएर आफ्नै अस्तित्वमाथि प्रश्नचिह्न लगाएको छ वर्तमान मानव समाज र सभ्यताले ।
हाम्रो वायुमण्डलमा ७८ प्रतिशत नाइट्रोजन, २१ प्रतिशत अक्सिजन र १ प्रतिशत कार्बन डाइअक्साइड, ओजोन, हैनान, फ्रेआनलगायत ग्यासहरू छन् । हरेक मान्छेले वायुमण्डलबाट २४ घण्टामा १६ लिटर अक्सिजन लिएर जीवित रहेको छ तर विश्वव्यापी ७ अरब ८० करोड जनसङ्ख्या भएको वर्तमान अवस्थामा गाडीवाहन, औद्योगिक उत्पादन, विकास निर्माण, शस्त्रास्त्रहरूको उत्पादन, लत्ताकपडा, कागज, गरगहना, फर्निचरदेखि सम्पूर्ण उपभोग्य वस्तुहरूका लागि इन्धनको प्रयोग प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन २ लिटर राख्ता १५ अरब ६० करोड लिटर हुन आउँछ भने वार्षिक तथ्याङ्क ५६.९४ अरब क्विन्टल हुन्छ । अझ यो त न्यूनतम हो किनकि पेट्रोलियम पदार्थहरू ग्यासमा परिणत भएपछि तौल अधिक हुन्छ । युरोपको औद्योगिक क्रान्तिपछि गएको ३ सय वर्षमा हाम्रो वायुमण्डलले भीषण आक्रमण बेहोरिरहेछ र तिनको सन्तुलन गुम्दै गइरहेछ ।
पृथ्वीमा जैविक विविधको महत्वपूर्ण सृष्टिकर्ता वायुमण्डलको अस्तित्वमा धावा बोल्ने अरू पनि क्रियाकलाप छन् । डढेलोबाट हुने वनविनाश, घाँसपात, कागज, फोहोर आदि नष्ट गर्न जलाइने चलनले धूवाँको मुस्लो आकाशमा मिलाउने प्रवृत्तिहरू, ध्वंसात्मक बमगोलाहरू पड्काउने आदि सयौँ तथ्य छन् । यस्तो मानव समाज र सभ्यतालाई के भन्ने ?
जलमण्डलमा पनि मानव समाजबाट भीषण आक्रमण भइरहेछ । टाढा जानै पर्दैन, नेपालको राजधानी काठमाडौँका बाग्मती र विष्णुमतीको मूल स्रोत क्रमशः सुन्दरीजल र शिवपुरी जङ्गलको घाँचमा अझै पनि सिधै पानी पिउन सकिन्छ । तर, ती नदीहरू जति मावन बस्तीनजिक आउँछन्, त्यति प्रदूषणको बाढी मिलाइन्छ । भनौँ, मलमूत्र, औद्योगिक रसायन र अरू थुप्रै मानवीय क्रियाकलापका ढलनालीहरू मिसिएर स्वच्छ पानी विषाक्त तुल्याइन्छन् । क्रमशः पशुपति र बालाजुको पुल आइपुग्दा दुवै नदीको पानी यति दूषित बन्छ कि एक गिलास पिउने हो भने मान्छे त्यहीँ ढल्नेछ ।
यसरी मान्छे हेर्दा सफा र घरआँगन पनि सफासुग्घर देखिन्छ । मीठो बोल्छन्, सुरिलो भाषामा गीत, कविता र कथा रचना गर्छन् र बेजोडको सङ्गीत र स्वरले मान्छेहरू अद्भूत देखिन्छन् तर प्रकृतिका लागि उनीहरूका क्रियाकलाप र दैनिकीहरू ज्यादै खतरनाक हुन्छन्, जो पहिला प्रकृति नाश गर्छन्, अनि पछि त्यो आफैंतिर सोझिन्छ । यो प्रवृत्ति विश्वका अन्य देशमा मात्र होइन, नेपालमा अझ धेरै छ ।
२५ वर्षअघि नै विकसित भनिएका अमेरिकीहरू प्रत्येकले प्रतिवर्ष ३ टन रासायनिक पदार्थ समुद्र र नदीमा मिसाउँथे । आज कति पुगेको होला, कल्पना पनि गर्न गाह्रो छ । त्यसका आधारमा सहर र गाउँमा बस्ने प्रतिनेपालीले प्रतिवर्ष न्यूनतम ३ क्विन्टल रसायन र सहरमा बस्नेहरूले थप ३ सय ६५ केजी मलमूत्रहरू पनि खोला र नदीमा मिसाइरहेको स्पष्ट भन्न सकिन्छ । विश्वव्यापी यो तथ्याङ्क कति होला ? कपडा, कागज, पुस्तक, जुत्ता, पेटी लगायत सम्पूर्ण दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू निर्माणमा ठूलो मात्रामा रसायन, पानी, इन्धन र रङ्गहरू प्रयोगमा आउँछन्, जसले जल, जमिन र आकाशमा अत्यधिक प्रदूषण फैलाउँछन् । त्यति मात्र होइन, २५ वर्षअघि नै विश्वका ९ करोड मान्छे समुद्री जलचर र झारपात सङ्कलन गर्ने पेसा अपनाउँथे । त्यसले समुद्रको इकोसिस्टम (खाद्यचक्र) मा गम्भीर आघात पार्छ । आज संसारभरि प्लास्टिक प्रयोगको बढोत्तरी भएको छ । पानी पिउने बोतल, कोक, पेप्सीका बोटल र अरु थुप्रै प्रकारका प्लास्टिकहरूको बाढी खोलाखोल्सी र नदीहरू हुँदै समुद्रमा पुग्छ । त्यस्ता वस्तुहरू समुद्रमा यति धेरै थुप्रिएका छन् कि एकै ठाउँमा भेला हुने हो भने ब्रिटेनजस्ता तीनवटा टापु बन्न पर्याप्त रहेको बताउँछन् पर्यावरण विद्हरू । अक्सिजनका ठूला स्रोत हन् समुद्र, नदी, ताल र खोलाहरू तर नरभक्षी बाघ भनेझैँ प्रकृति भक्षी र धर्तीभक्षी छन् मानवीय क्रियाकलापहरू ।
अब भूमण्डलबारे थोरै चर्चा थपौँ । झन्डै ७ अरब ८० करोड जनसङ्ख्या भएको पृथ्वीमा उनीहरूलाई खाद्यान्न आपूर्तिका लागि ९० प्रतिशतभन्दा अधिक जमिनमा रासायनिक मल, विषादी र रासायनिक हार्मोनहरू प्रयोग गरिन्छ । यसले माटोको प्राकृतिक संरचना (नाइट्रोजन, फोस्फरस, पोटास, कार्बनलगायत १६ तत्वहरू) नष्ट गरेर भविष्य अन्धकार बन्दै छ । किनभने त्यस्तो जमिनमा ६९ बालीभन्दा अरु उब्जदैन भनेर युरोपेली, अमेरिकी वैज्ञानिकहरूले नै घोषणा गरिसके । यो भनेको २५ वर्षभन्दा अधिक होइन, अनि हाल उत्पादन भइरहेको खाद्यान्न पनि कार्बोनेट र अग्र्यानोफोस्फेट विषले भरिएर मान्छेलाई १ सय ५० भन्दा अधिक रोगहरूले ग्रस्त पारिरहेछ । सन २०१९ को अन्ततिर दक्षिण अमेरिकाको अमेजन नदी किनार र २०२० को सुरुमा अस्ट्रेलियाको जङ्गलमा भीषण डढेलोले पृथ्वीको करोडौँ हेक्टरको जङ्गल र पचासौँ करोड जीवजन्तु, पशुपक्षी खरानी बने । वास्तवमा त्यस्तो प्रकृति विनाश भइरहँदा त्यसलाई निभाउनु विश्वका सम्पूर्ण जनताको साझा सरोकारको सवाल हो तर सबैतिरको राष्ट्रवादको पर्खालले त्यसो हुन सकेन । यी सबै कुराले भूमण्डलको सन्तुलित वातावरण तीव्र गतिले असन्तुलित तुल्याउन भूमिका खेलिरहेछ ।
यसरी वर्तमान मानव समाव र सभ्यताका सबै मूल्यमान्यता प्रकृति प्रतिकूलको हुनाले वायुमण्डल, जलमण्डल र भूमण्डल नष्ट गर्नेतिर बढिरहेछन् । त्यसैको परिणाम यहाँ हरित गृह प्रभाव, पराबैजनी किरणको खतरा र अम्लीय वर्षाको सम्भावना बढ्दैछ । त्यति मात्र होइन, केही राष्ट्र आफूलाई सर्वोपरि मान्दै विश्व नै विनाश गर्ने आणविक शस्त्रास्त्रको आड लिएर एकले अर्कोलाई चुनौती, चेतावनी र धम्की दिएका ठोस प्रमाण छन् हजारौँ हजार । के यिनैको विश्वास र भरमा संसार छाडिदिने ? आज प्राकृतिक र राजनीतिक दुवै दृष्टिले पृथ्वीको जैविक विविधता, मानव समाज र सभ्यताको अस्तित्वमाथि प्रश्नचिह्न लागिरहेछ ।
त्यसैले यसको रोकथामका लागि अब तुरुन्तै विश्वभरका मानव जातिले यहाँका राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, पर्यावरणीय संरचनामा आमूल परिर्वतन गरी सम्पूर्ण व्यवस्थाहरू प्रकृति संसरक्षण अथवा जलमण्डल, भूमण्डल र वायुमण्डलाई सर्वोपरि मानी स्थापना गर्नुपर्छ । यसका लागि कुनै पनि पर्खालहरू भत्काउन हिम्मत गर्नुपर्छ । मानव जाति अन्तर्राष्ट्रिय नै हुनुपर्छ र सम्पूर्ण राष्ट्रहरू, तिनका सिमानाहरू सङ्ग्रहालयमा मात्र राखिनुपर्छ । यो अवस्य हुन्छ, तर कहिले हुन्छ ? त्यो भने विश्वका आमजनताको चेतना, सक्रियता र जागरुकतामा भर पर्नेछ । आज संसारभरि महिला र युवाहरू आआफ्नो राष्ट्रका भ्रष्ट शासकहरूविरुद्ध छटपटाइरहेछन् । मजदुर र किसानहरू पनि परिवर्तन चाहिरहेछन् । लेबनान, चिली, मेक्सिकोका आन्दोलनहरू त्यसका उदाहरण हुन । अब यस्ता सबै खाले आन्दोलन र सङ्षर्घलाई पर्यावरण संरक्षण अभियानसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्छ ।
गत डिसेम्बरमा चीनको वुहान सहरमा देखिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) पनि ‘समुद्री जीवित जीवको मासुबाट भएको’ भन्ने भनाइ आइरहेछ । वास्तवमा उक्त जीवमा कोरोना भाइरस कसरी उत्पत्ति भयो ? निश्चय नै यसको कारण जलमण्डल अथवा समुद्र प्रदूषण हो, जसको कारक मानव जाति नै हो, चीनको मात्र होइन, संसारभरिकै हो ।
आगामी दिनहरूमा स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणका लागि मानव समाज र सभ्यताले पृथ्वीको जलमण्डल, भूमण्डल र वायुमण्डललाई स्वस्थ र सन्तुलित तुल्याउने मार्गमा लागे अवश्य नै स्वस्थ, सुख, शान्तिको जीवन जिउन सम्भव होला । अन्यथा, भौतिक विकास र वृद्धिका लागि मात्र वर्तमानझैँ आँखा चिम्लिए कोरोना भाइरसभन्दा हजारौँ गुणा शक्तिशाली भाइरस व्युत्पत्ति भएर यो चहलपहलको मानव समाज र सभ्यतालाई नष्ट पारिदिन सक्छ प्रकृति महामाताले ।